पहिला जेलमा जाक्यो, संकटमा बालुवाटार डाक्यो !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
काठमाडौं – नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूह सरकारका लागि विस्तारै टाउको दुखाईको विषय बन्न थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको टाउको दुख्न थालेको छ । एकातिर विदेशी घेराबन्दीमा परेका, सत्ता गुमाउने त्रासमा रहेका ओली आन्तरिक संकटका कारण झन् धरापमा पर्न थालेपछि उनले फरक बाटो समातेका छन् ।
तत्कालका लागि आलोचनाबाट मुक्त हुन उनले विप्लव समूहसँग वार्ताको ढोका खुला गरेका छन् । उनले व्यक्तिगत हिसाबमा विप्लवसँग वार्ता गरी सहमतिमा ल्याउने प्रक्रिया थालेका छन् । त्यसका लागि विशेष दूतका रूपमा नेकपाका महासचिव तथा उनका विश्वासपात्र विष्णु पौडेललाई परिचालन गरेका छन् ।
यसबाहेक विप्लव समूहको जानकारी यथेष्ट हिसाबले झिकाउनका लागि अर्का उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई पनि उनले परिचालन गरेका छन् । उच्च स्रोतका अनुसार पार्टीको हिसावमा पौडेल र सरकारका तर्फबाट पोखरेललाई गोप्य हिसाबले विप्लवका उच्च तहका नेतासँग वार्ता गरी सहमतिको विन्दुमा झिकाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । सहमतिको खाका बने बालुवाटारबाटै वार्ता गरिने सन्देश पौडेलले सुनाएका थिए ।
विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएर त्यसको हिंसात्मक हिसाबकिताबबाट सरकारलाई गलाउने र अप्ठेरोमा पार्ने खुमलटारको नियोजित योजना हुनसक्ने ठानेपछि बालुवाटारमा आफू निकटका नेतालाई डाकेर प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवसँग वार्ताको तयारी थालेका हुन् । जसको पहिलो चरणमा उक्त समूहका नेता हेमन्तप्रकाश ओलीलाई पौडेलले भेटीसकेका छन् । आजको जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छापिएको छ ।
हतारमा आएर विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध गर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको प्रस्ताव पास गर्दा आफू संकटमा परेको चाल पाएका प्रधानमन्त्री एकाएक फेरिनुको कारणचाहिँ जथाभावी हुन थालेको इन्काउन्टर प्रकरण पनि रहेको बालुवाटार स्रोतले जनायो ।
‘प्रतिबन्ध गरे पनि इन्काउन्टर नगरी पक्राउ गरेर जेलमा राख्ने अनि वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना थियो । तर, खुमलटार टावरबाट चलेको प्रहरीले ठिक त्यसको उल्टो गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री वार्ताका लागि तयार बन्नु भएको हो । यसमा गम्भिर भएर लाग्नुभएको छ’, स्रोतले भन्यो ।
पौडेलले जेलमा ओलीसँग प्रधानमन्त्रीको सन्देश र आगामी तयारीबारे एक घन्टा भन्दा लामो समयसम्म कुराकानी गरेका थिए । विप्लव समूह पनि वार्तामा आउन तयार रहेको संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्रीले तत्परता देखाएका हुन् ।
नेपाली सेनासँग निरन्तर संवादमा रहेका रक्षामन्त्री पोखरेललाई अहिले हिंसा भन्दा पनि वार्ता गरी समस्याको समाधान खोजे राम्रो हुने सुझाव आएपछि सोही सन्देश बालुवाटार पुगेको थियो । विप्लवलाई कारण देखाएर विदेशी शक्तिले पनि सरकारमाथि कुनै न कुनै प्रकारको दबाब राख्न सक्ने भन्दै सेनाले उक्त सुझाव दिएको थियो ।
पछिल्लो समय विप्लव नेकपाले उठाएका मुद्दा वार्ता र सहमतिबाट समाधान गर्ने पक्षमा सरकार पुगेको छ भने सो पार्टीले भने वार्ताका लागि ३ सर्त अगाडि सारेको छ । विप्लव नेकपाले सरकारसँग वार्ताका लागि पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, जेलमा रहेको कार्याकर्तालाई तत्काल रिहा गर्ने र वार्ताका लागि औपचारिक रुपमै पत्रचार गर्नुपर्ने ३ सर्त राखेको छ ।
पौडेलले उक्त सर्तहरू प्रधानमन्त्रीलाई व्रिफिङ गरेपछि आगामी छलफल कसरी अघि बढाउने भन्ने निर्णयमा पुुगिने जनाएका छन् । यसबाहेक मारिएका कार्यकर्तालाई सहिद घोषणा गरी उचित राहत र क्षतिपूर्ति दिने सम्बन्धमा पनि कुराकानी भएको स्रोतको दाबी छ ।